Tora Mibvunzo yako Inopindurwa neAgweta Nhasi, Kurara Zvirinani Manheru. Tinokubatsira Izvozvi. - NJ & NY Zvivakwa, Chekutanga, Kufukura Defence uye Bankruptcy Magweta
Email: [Email akadzivirira]
Chinyorwa: (917) 687-4219
Nyorera uye Tevera
Dana Zvino Kuti Ive Yemahara Isu Chikamu(844) 533-3367
NJ & NY Real Estate, Selectate, Foreclosure Dziviriro uye Bankruptcy Magweta
Jersey Guta Rekutengesa Zvivakwa
Ongororo yeVatengi Zvivakwa
Kwayedza, Wills, Kuvimba uye Estate Litigation
KUDZIDZIRA PAKUTI ZVOKUDYA
Tora Mibvunzo yako Inopindurwa neAgweta Nhasi, Kurara Zvirinani Manheru. Tinokubatsira Izvozvi.
Misa Sheriff Kutengesa
Kutengesa kutarisana nePfupi Kutengesa Kunzvera
Real Estate Transaction Kugara uye Kutengesa
Kwayedza, MaWill, Trasti, uye Litigation
Chitsauko 13 Kubhuroka
Chitsauko 7 Kubhuroka
Chitsauko 11 Kubhuroka
Isu tinoenda pamusoro pesarudzo dzako dzese kuti tikubatsire kuronga uye kuona nzira yako yekuita yakanaka. Isu tiri-yakazara-mutemo mutemo kambani nemagweta akavakirwa muJersey City, NJ; Hackensack, NJ; Mahara, NJ; uye Brooklyn, NY. ine akawanda magweta avo vese vakazvipira kukubatsira iwe.
GIMME RANGU REMAHARA IN-KUSVIKIRA STRATEGY SESSION nemugweta Nhasi!
Tichaita 3 zvinhu mumusangano uyu:
Tichaenda pamusoro pezvesarudzo zvako.
Isu tinogadzirira chinyorwa chakanyorwa nezvenyaya yako yaunogona kuenda kune imwe gweta kana ukasarudza kusashanda nesu.
Tinogona Sei Kukubatsira?
Tora Rubatsiro Zvino
100% Yakavanzika Yakasimbiswa
Bata New York kana New Jersey Foreclosed Defense Lawyers Nhasi.
Iwo maMutemo Mahofisi aPatel, Soltis & Cardenas musters akanakisa ematarenda ematare muNew York neNew Jersey, akatarisa pakatariswa, kuteedzera kukweretesa, kubhuroka, probate, uye zvivakwa zvekutengesa muNew Jersey. Kana iwe uchifunga iwe ungangoda NJ Foreclosed Gweta or NY Foreclosed Gweta tanga nekutaura kune imwe YEMAHARA nhasi. Isu tiri mhuri yakatsiga yemhuri inotarisana nekushandira vanhu vamwe nevemabhizinesi avo. Kunyangwe iwe uchida kudzivirira pamberi peNew York kana New Jersey kana mhuri yako Kuda. Isu tine zviri pamutemo kuziva-uye hunyanzvi kwauri. Nhanho yekutanga yekugadzirisa chero dambudziko nderokunzwisisa kuti une sarudzo. Taura negweta nhasi nezvese zvaunosarudza.
UNE ZVESVO - TENDESA KUTI TODAY !!
Shandisa Foreclosure Defense Gweta kuti udzivirire kodzero dzako.
Kana iwe uchida kudzivirira kufembera kana kutora chikwereti kuchinjwa, iwe unofanirwa kubvunza kune Foreclosure Defense Gweta ikozvino kuti uende pamusoro pesarudzo dzese dzekuchengetedza imba yako. Nhanho imwe neimwe yaunotora nhasi inogona kukuwanira imwe nguva mune ramangwana. Kubiridzira Gweta iro rinoziva mutemo wezvekutanga ndiyo yekutanga nhanho pakuchengeta imba yako.
Chitsauko 7 Kubhuroka: Kuwana kubva pakufaira kuenda kune chikwereti zororo kuri pedyo nekukurumidza.
Zano rezvemitemo rinowanzo kupihwa mukutsinhana nemari kana imwe yemubhadharo unooneka
SeGweta reNew Jersey Estate, tichakubatsira iwe kana iwe uchifanira kuhwina Probate Litigation kana kugadzirira Kuda kwako kuitira kuti mhuri yako igone kudzivirira litigation mune ramangwana.
Iko kuchinjirwa chikwereti kunochinja mazwi echikwereti chiripo. Izvi hazvisi kugadzirisa….
Iyo Pfupi Yekutengesa Negotiation ihurukuro pakati pevanhu vaviri kana kupfuura vanhu kana mapato anopangirwa kusvika…
Chitsauko 13 kubhuroka kuchamira kufanozivisa…
Kukakavara kunogona kuve kwekuzvidira kana kwekumanikidzira kunyangwe hazvo achiremerwa arbitration anogona kungouya
IVA NEMUDZIMA WONYENGA ZVAKO ZVINOGONA UYE NEMAHARA
Bata nesu uye isu tichaitira 3 zvinhu kwauri:
1. Tichaenda pamusoro penyaya dzese dzemutemo dzaunotarisana nadzo.
Nhanho yekutanga yatinotora ndeye kuteerera kune izvo chokwadi chiri kutenderedza mamiriro ako. Tinoda kuziva zvese zvaitika, uye zvaunoda kuti zviite zvinotevera. Tinoda kuti utiudze nemazwi ako iwe zvakaitika, uye chinangwa chako chekupedzisira ndechei mamiriro ako. Nguva zhinji tine vatengi vari muchikwereti, vakatarisana nenyaya dzavanoshuvira kuti vadzivise asi vanofanirwa kugadzirisa. Zvatinokurudzira zvinobva pane zvavakaedza kare uye nezvavari kuda kuita mune ramangwana. Mune mamiriro ekufungidzira, kune akawanda mhinduro sekufanoratidzwa kwekunyepedzera mumatunhu kana federal court, kubhadhara imba, kutengesa iyo nzvimbo mune pfupi-kutengesa kana kutengesa nguva dzose, kubhuroka (Enga chitsauko 7, chitsauko 13 kana kunyange zvese zviri zviviri mamiriro acho inoda icho.) Pasina kunzwisisa yako yakazara nyaya, hatigone kusvika pachikamu icho chatinotaura pamusoro pesarudzo.
2. Tichaenda pamusoro peDziviriro uye Zvisarudzo zvaunazvo.
Mamiriro emunhu wese akasiyana, uye kwete ese mhinduro anoshanda kumunhu wese. Chitsauko 7 kubhuroka kungave kwakaringira mhuri imwe, asi kwauri, zvinogona kukonzera iyo Chitsauko 7 Trustee kuda kutengesa imba yako. Pasina kuenda pamusoro pezvakakomberedza mamiriro ako ezvinhu hatigone kupa sarudzo idzo dzinogona kukukodzera kwazvo. Kana iwe waita chikwereti chekudzokorora munguva yakapfuura, isu tichaongorora yako yapfuura chikwereti modction uye ona kuti nei yakarambidzwa, uye tinogona kuzoita mazano ekuti ingatenderwa sei. Isu tichakuudzawo kana mari yako isingakwanisi kukubvumidza kana kuronga chirongwa chekuwedzera mari yako. Kana iwe uri kutarisa mukudzivirira imba yako mudare, isu tichaenda kuburikidza neyese maficha edare kuti uone kana iwe uine chero dziviriro yawakakundikana. Tine nyaya dzinosanganisira kusakosha kwebasa, tarisa zvinhu zvakagadziriswa
3. Isu tichagadzirira rondedzero yakapfupika yezvinyorwa zvemamiriro ako aunogona kutora kune vamwe magweta kana isu tisina kukodzera sewevamiriri vako.
Kana isu tisiri mutambo kwauri segweta, tinokutumira kopi yemanyorero atakagadzirira panguva yekubvunzurudzwa kwedu. Ichanyora chokwadi chezvemamiriro ako. Unogona kushandisa izvi kana uchida kubvunzurudza mamwe magweta kana isu tisina kukodzera segweta rako.
Isu hatitore nyaya yese yatinounzwa. Kana isu tikatadza kukuvakira iwe, tichakuudza. Tichaongorora zvese zvaunosarudza, asi pakupera kwezuva, kana tikatadza kukubatsira, tinokuudza.
Tine magweta anotarisana nezvinhu zvakasiyana zvemutemo. Isu tine New Jersey Licensed magweta anotarisa kune Foreclosure Defense, Real Estate Transaction, Bankruptcy, Probate, uye Chikwereti Kuunganidza / Kubatanidza. Isu tine New York Licensed magweta anotarisa kune Foreclosure Defense, Real Estate Transaction, Bankruptcy, Probate, Mhuri Mutemo uye Chikwereti Kuunganidza / Kubatanidza. Paunobatana nesu isu tichafanira kukubvunzurudza muchidimbu kuti uone kuti wakabatana negweta rinogona kukubatsira nezvenyaya yako.
UYE UNE ZVESANGANO - DZVIMBISA KUTI TODAY
Isu tine 3 nhanho yekuita kuti isu tigone kukubatsira, kana kukuisa iwe kuti utaure negweta rakasiyana nerondedzero yezvinyorwa yakatenderedza mamiriro ako. Isu tinonzwisisa isu takakodzera munhu wese, asi isu tinokubatsira kuitira kuti iyo inotevera Gweta yaunobata iwe, iwe unogona kurudyi kumhinduro dzaunoda.
100% Yakatarisa Pane Nyaya Yako
Tinogona kukubatsira kugadzirira thato, pamwe nehupenyu hwekugara / yekurapa yekuraira yekurapa, kana kugadzira chivimbo chekuchengetedza chako. Yedu New Jersey Probate magweta ichakubatsira iwe sewe muiti we
Iyi fekitari yakavambwa kubatsira kuponesa vanhu dzimba kubva pakufumuka. Vafambidzani vedu vese vanotarisa pakudzivirira kudzivirira muNew Jersey kana New York. Isu tinonzwisisa mikana mikuru yekugadzirisa humbowo uchishandisa litigation, chikwereti kushandurwa,
Kubhuroka, kusanganisa New York kubhuroka uye New York Bankruptcy, maitiro edare remubatanidzwa akagadzirirwa kubatsira vese vatengi uye mabhizinesi kubvisa kana kudzorera zvikwereti zvavo pasi pekudzivirirwa kwedare rekubhuroka. Iwo mutemo wemubatanidzwa
Wona All Services
Kubhuroka Chikwereti Chakabvisirwa
Pro Bono Maawa Akashanda
Peter naVeer vese vanga vari nyanzvi uye nekukurumidza nemhinduro yavo kumibvunzo yedu. Ivo havana kungova nechokwadi chekuti tinowana mhinduro kumibvunzo yedu asi ruzivo chairwo rwakapihwa kuti vaite sarudzo iri nani. Kunaka.
Onai zvose Testimonials
NEI TESE TINOGONA?
Kana iwe uri kutsvaga kuti uwane yakanakisa timu yemagweta anonzwisisa dzakawanda nzvimbo dzemutemo muNew Jersey, isu tiri boka revamiriri vane ruzivo vanokubata zvakanaka semutengi. Tine magweta mazhinji vanoita mutemo une chekuita neye Real Estate Matters, Mamogeji, Foreclosure Defense mutemo, Kukweretesa Modified, Nzira Dzakanakisisa dzekutenga kana Kutengesa Real Estate, Will & Powers YeGweta, Probate & Estates, Chikwereti Kubvisirwa, Chako Kubhuroka, uye Bhizinesi. Kubhuroka. Tichadzivirira kodzero dzenyu apo tinoshanda seboka kuti tikupe rubatsiro chairwo. Magweta edu anonzwisisa nzira idzo dzese idzi mhando dzezvinhu dzinopindirana. Isu tichadzivirira kuvanzika kwako kunyangwe iwe uchitidana pafoni kana kutishanyira mune rimwe remahofisi edu kuti ubvunze. Kunyangwe iwe unosarudza kuonana sei nefemu yedu isu tichaenda pane zvaunosarudza.
Tine mahofisi muJersey City, NJ mhiri kubva kuHurson County Courthouse; Hackensack, NJ yakakomba kona kubva kuBergen County Courthouse; Huru, NJ yakadzika nzira kubva kuMonmouth County Courthouse, Manhattan, NY ine nzvimbo muM Midtown New York City; uye Brooklyn, NY mhiri kubva kuKings County Courthouse iyo iri pasi mumugwagwa kubva kuBrooklyn Bankruptcy court kusangana nevatengi vedu. Isu tinopa pachena kubvunzana pane dzakawanda kesi kune ese nyaya yedare muNew Jersey neNew York.
Ndokumbira kuti utitane ku (844) 533-3367 kana kuti email email kwatiri [Email akadzivirira]
Vimba yedu ruzivo kuti ishumire zvese zvako zvepamutemo uye zvemari zvinodiwa mu2018 uye zvimwe. Yedu yakasimba yakazvipira kukubatsira iwe.
Veer P. Patel, Esq.New Jersey - Kubata Partner
Derek (DJ) Soltis, Esq., MBA / MSKubhuroka Kwekudzidzira Maneja - Partner
Lazaro Cardenas, Esq.Real Estate Exercise Manager
Jason C. Bost, Esq. , MBANew York - Kubata Partner
Tarisa Mitezo Yese YeChikwata
Yazvino Kubva Kune Iyo Blog
Vanoshandira kodzero muNN Foreclosed isati yasvika uye shure kweJen Sheriff Kutengesa
MAHARA pamusoro peChitsauko 13 Kubhuroka
Wona Mablog ese
Chii chinoitika kana ndikasiya mukweretesi kunze kweBankruptcy yangu?
Ko Zuva rePay rezvikwereti rakaputirwa nekubhuroka?
Kuchengetedzwa kwenzanga kunoonekwa semari mukubhuroka here?
Tarisa ESE FAQ
1. Tichaenda pamusoro penyaya dzese dzemutemo dzaunotarisana nadzo. 2. Tichaenda pamusoro peDziviriro uye Zvisarudzo zvaunazvo. 3. Isu tichagadzirira rondedzero yakapfupika yezvinyorwa zvemamiriro ako aunogona kutora kune vamwe magweta kana isu tisina kukodzera sewevamiriri vako.
Bata Izvozvi Kuti Uwane Mahara Isu Chikamu
Nyorera kuNhau Dzedu Dzemwedzi
Ndokumbirawo upe zita rako uye kero yeemail kunyorera tsamba yedu yemwedzi.
Jersey City Hofisi:
Telefon: (844) 533-3367
Kumusoro, eHackensack, NJ 07601
New York City Hofisi:
89 Musika St., 4th pasi,
Iwo Mutemo Mahofisi aPatel, Soltis & Cardenas anopa kubhuroka, kufanozivisa uye kukweretesa kuchinjika kumiririra kune vatengi mudunhu rese reNew Jersey neNew York nzvimbo nemahofisi kuJersey City, Freehold, Hackensack, Manhattan, uye Brooklyn. Iyi webhusaiti ndeyeMutemo Kushambadzira. Ruzivo rwuri pawebhusaiti urwu nderwe rwekuziva ruzivo chete. Hapana chinhu pane ino saiti chinofanira kutorwa seyambiro yemutemo kune chero nyaya yemunhu kana mamiriro. Ruzivo urwu haruna kuitirwa kuti rugadzire, uye kugamuchira kana kuona hakuzi hukama hwevatongi. Isu tiri magweta, asi isu hatisi magweta ako kusvikira muchengeti asainwa.
KUSVIKIRA KUKOSHA. Mhedzisiro yapfuura havavimbi zvichaitika mune ramangwana. Isu tiri sangano rekubatsira zvikwereti. Isu tinobatsira vanhu faira yekuzorora pasi peBhengi Code Code.
Copyright © 2020 naPatel & Soltis, LLC. Kodzero dzese dzakachengetedzwa.
Fonera Gweta Zvino